Ngibhekana kanjani nokukhathala ngesikhathi sokuvivinya umzimba? - Ukuzivocavoca Umzimba
Main > Ukuzivocavoca Umzimba > Ukuzizwa ukhathele ngesikhathi sokuzivocavoca - ukuthi ungabhekana kanjani
Ngibhekana kanjani nokukhathala ngesikhathi sokuvivinya umzimba?
Thumelaukukhathala kokuzivocavocakungahle kube umkhiqizo wezinto eziningana, kepha izindaba ezinhle ukuthi ukulwaukukhathalangemuva kwe- aZivocavocekungaba lula.
Phinda uhlole i-Zivocavoceuhlelo.
Phuza amanzi ngaphambi kokuzivocavoca.
Yidla ngemuva nje kokuzivocavoca.
Baphakamisa izinsimbi. Isikhathi sokuqala sizwakala silula, kepha ilifti ngayinye ithatha umzamo owengeziwe futhi uze ungabe usakwazi ukuqhubeka. Ezingalweni zakho, imisipha ebhekene nokuphakamisa ayisakwazi ukusebenza.
Kungani imisipha yethu ikhathala? Sivame ukusola i-lactic acid noma ukungabi namandla, kepha lezi zinto zizodwa azichazi ukukhathala kwemisipha. Kunesinye futhi isici esibalulekile: amandla emisipha yokuphendula amasiginali avela ebuchosheni. Ukuqonda izimpande zokukhathala kwemisipha, ukuqonda izimbangela zokukhathala kwemisipha kusiza ukuqonda ukuthi imisipha isebenza kanjani ngokuphendula isignali evela kunzwa.
Lezi zimpawu zisuka ebuchosheni ziye ezicutshini ngengxenyana yomzuzwana ngamaseli amade, amancane abizwa ngama-motor neurons. I-motor neuron ne-muscle cell zihlukaniswe yigebe elincane, kanti ukushintshana kwezinhlayiya kulo lonke leli gebe kwenza kube nokuncipha. Ngakolunye uhlangothi lwegebe, i-motor neuron iqukethe i-neurotransmitter ebizwa nge-acetylcholine.
Ngakolunye uhlangothi, izinhlayiya ezikhokhisiwe noma ama-ion agxilisa ulwelwesi lweseli yemisipha: i-potassium ngaphakathi ne-sodium ngaphandle. Ephendula isignali evela ebuchosheni, i-motor neuron ikhipha i-acetylcholine, ebangela izimbotshana kulwelwesi lweseli yemisipha ukuthi zivuleke. Kuyangena isodiyamu bese kuphuma i-potassium.
Ukuhamba kwalezi zinhlayiya ezikhokhisiwe kuyisinyathelo esibucayi ekunciphiseni kwemisipha: ushintsho ekuphatheni lwakha isignali kagesi ebizwa ngokuthi amandla okwenza isenzo asakazeka kwiseli yemisipha, evuselela ukukhishwa kwe-calcium egcinwe kuyo. Lesi sikhukhula se-calcium senza ukuba imisipha ingene ngokuvula imicu egqitshwe emisipheni ukuze ikhiye futhi idilike ndawonye, ​​idonse imisipha. Amandla asetshenziselwa ukushayela ukusikwa aqhamuka ku-molecule ebizwa nge-ATP.
I-ATP isiza futhi ukumpompa i-ion emuva kolwelwesi, iphinde imise ibhalansi ye-sodium ne-potassium ezinhlangothini zombili, inqubo eziphindayo njalo uma izinkontileka zemisipha. Ngokuncipha ngakunye, kusetshenziswa amandla esimo se-ATP, kudalwa imikhiqizo kadoti efana ne-lactic acid, futhi amanye ama-ion asuka kulwelwesi lweseli lemisipha, ashiye ngemuva iqembu elincane kakhulu. Yize amaseli emisipha esebenzisa i-ATP lapho esebenza kaninginingi, akhiqiza ngokwanda, ngakho-ke nemisipha ekhathele kakhulu ayipheli isikhathi esiningi.
Futhi yize imikhiqizo eminingi kadoti i-acidic, imisipha ekhathele isagcina izinga le-pH lingaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile, okuphakamisa ukuthi izicubu zisusa ngempumelelo le ions calcium yemfucuza, etholakala ngokushesha eduze kolwelwesi lweseli yemisipha ukusetha kabusha kahle uhlelo. Noma ubuchopho buthumela isignali, ingqamuzana lemisipha alikwazi ukuveza amandla esenzo adingekayo ekusikeni. Noma i-ion efana ne-sodium, i-potassium, noma i-calcium ngaphakathi noma ezungeze amaseli emisipha asephelile, la ma-ion ayanda kwenye indawo emzimbeni.
Ngesikhashana esincane, zigeleza zibuyela ezindaweni lapho zidingeka khona, kwesinye isikhathi ngosizo lwamaphampu we-sodium ne-potassium asebenzayo. Ngakho-ke lapho ume isikhashana bese uphumula, ukukhathala kwemisipha kuzokwehla njengoba lezi ion zigcwalisa kuwo wonke umsipha. Uma uzivocavoca umzimba njalo, kuthatha isikhathi eside ukukhathala kwemisipha ukusetha isikhathi ngasinye. Uma unamandla, kulapho umjikelezo wezimpawu zemizwa ezisuka ebuchosheni ukuze uthinte imisipha kufanele ziphindaphindwe ukuze kuphakanyiswe inani elithile yesisindo.
Imijikelezo embalwa isho ukwehla kwe-ion okuhamba kancane. Njengoba ukuqina komzimba wakho kuthuthuka, ungaqeqesha isikhathi eside ngamandla afanayo. Imisipha eminingi ikhula ngokuzivocavoca umzimba, kanti imisipha emikhulu nayo inezitolo ezinkulu ze-ATP namandla amakhulu okususa imfucuza, eqhubekisela phambili ukukhathala nokuqhubekela phambili esikhathini esizayo.
Ngiwathola kanjani amandla okuzivocavoca umzimba?
Kepha ngemuva kwawo wonke lowo msebenzi, awuzizwa sengathi ukhulisa eyakhoZivocavocengenxa yokushoda kwe-amandla.
Nazi izinto eziyisihlanu eziphambiliZivocavoceukudla ukukusiza ukukhulisa iamandlangaphambi kwe-Zivocavoce.
Ibhotela le-Almond. Okulula.
AmaBlueberries. Ukuba nohlobo olufanele lukashukela kungakusiza ukuthi uphumelele ejimini.
Ngakho-ke untula amandla, uzizwa ukhathele ngiyayithola, kepha izindaba ezinhle zikule ndatshana yaleli sonto engizokufundisa ngayo ukuthi ungaligcina kanjani lelo zinga lamandla ngakho-ke asiqale ngezinto zokuphila manje ezweni lanamuhla lama-24/7 lapho sithambekele ekucinaneni kakhulu ezimpilweni zethu asijwayele ukuhlupheka ngoba siqala ukukhohlwa ukuzinakekela. Manje, ngaphambi kokuba siqale ukubheka izeluleko, ngifuna ukuthi ucabange ngale mibuzo embalwa, ngakho-ke kuyini ukudla kwakho, kunempilo yini? Ingabe udla izithelo eziningi, udla imifino eningi, ulale kahle, udla ngesikhathi, uphuza kakhulu utshwala, uphuza i-caffeine eningi, uphuza iziphuzo eziningi zamandla, ngakho-ke ngicela ucabange ngakho njengoba sidlula amathiphu wendlela yokuphila ithiphu eyodwa Mhlawumbe enye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuthi kufanele uqiniseke ukuthi unokudla okunempilo, okunomsoco ngoba lokhu kuyisisekelo samandla akho, ngakho-ke uma kufanele udle okusanhlamvu okuphelele, kufanele Amaprotheni nawo ayazithatha, udinga izithelo, udinga imifino, kepha akulula kangako ukukuchaza kule ndatshana emfushane. Ngenhlanhla i-NHS inombhalo omuhle impela wokuthi ungaba kanjani nokudla okunempilo okunempilo, futhi ngizoshiya isixhumanisi encazelweni engezansi engingancoma noma ngubani ayifunde ukuze aqiniseke ukuthi wenza konke ngendlela efanele Indlela Yokuphila -Inombolo yethiphu ngandlela-thile, ngicabanga ukuthi lokhu kudla kuphansi kancane kepha kunesizathu sako futhi uma kusebenza kuzobukeka kupholile, njalo njalo ngakho uma ukukwenza kufanele kusize izinga lamandla akho futhi hhayi ungaphuthelwa ibhulakufesi njengoba kubonakala kungokwesithathu kwethu lokhu kungokwesithathu, uyakuphuthelwa futhi lokho ngeke kukusize ukugcina amazinga kagesi ngakho-ke yidla kathathu ngosuku ngezikhathi ezithile futhi noma nini lapho ulambile phakathi nasesimweni sokudla okuncane, ezinye izithelo ezinempilo Indlela Yokuphila Ithiphu Yesithathu Yidla ukudla okunothe nge-ayoni ngoba amazinga wakho wensimbi aphansi g, ungazizwa ukhathele futhi ukhathele.
Lokhu kubaluleke kakhulu manje ngentsha namantombazane ngoba usengozini enkulu yokulahlekelwa yinsimbi egazini lakho lokuya esikhathini ngesikhathi sakho, ake sihlale esitofini sengxenye elandelayo. Izindaba ezimnandi ukuthi kunokudla okuningi okunezinsimbi eziningi ngokwesibonelo inyama ebomvu, imifino eluhlaza, nokudla okuqinisiwe njengamabele ngizobuye ngikushiyele uhlu olugcwele kule ncazelo engezansi. Ithiphu Inombolo Yesine Ngabe Uhlala Unamanzi Awanele? Siphuza izingilazi zamanzi eziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili ngosuku futhi, kanti, lokhu kuyisengezo kuziphuzo esizithathayo ekudleni kwethu.
Kufanele futhi ubuke ukuphuza kwakho utshwala ngoba lokhu kungaholela ekuphelelweni amanzi emzimbeni nakwe-caffeine futhi futhi kuzokunika lawo mandla, kepha ngokuhamba kwesikhathi uzokwakha ukubekezelelana futhi uzodinga i-caffeine eyengeziwe ukuze uzigcine usezingeni elifanayo lamandla futhi uma awutholi ukuthi uzozizwa ukhathele ngokwengeziwe futhi sicela ukhumbule ukuthi kokubili utshwala ne-caffeine kuzothinta ikhwalithi yokulala kwakho ngakho-ke le nombolo yesihlanu yendlela yokuphila izokwenza uzizwe ukhathele kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke yehlisa ushukela ngokujwayelekile manje siyazi ukuthi abantu base-UK abadala nezingane badla ngokweqile futhi badla ushukela omningi kakhulu ngiyazi ukuthi uzokhahlela ushukela ukuqala kulowo mandla aphezulu. Sizosheshe siphelelwe ushukela futhi uzosala ukhathele futhi ukhiphe amanzi, manje mhlawumbe ungakuyisa kuwe, kodwa Abraham wenza kanjani emhlabeni olandelayo nginciphisa ushukela kulula kakhulu ukusho kunokukwenza futhi uqinisile ushukela cishe kukho konke Kusezithelweni kusemifinjini kepha lezo ezisezithelweni nemifino zilungile ngakho-ke kulungile ukuba nazo kepha maqondana nokwehlisa ushukela kuyinkimbinkimbi kakhulu kepha ngenhlanhla i-NHS inombhalo omuhle impela ngalesi sihloko esisodwa esishicilelwe ngokudla okunoshukela omningi nokuthi ungayinciphisa kanjani.
Engizokwenza ukushiya isixhumanisi sakho encazelweni engezansi futhi ngiyakuqinisekisa uma ufunda lokhu ngizoba ushukela, kulungile-ke saqhubeka nokudla kepha manje ake sibheke ezinye izihloko ku. Imibuzo embalwa ejwayelekile engiyibuza iziguli zami yile: Uyazivocavoca umzimba? Uma uthatha isihlwathi emini futhi uphuza noma imuphi umuthi noma umuthi wamakhambi ngoba eminye yawo ingadala ukukhathala, ake siqhubeke, ngakho-ke cabanga ngomzuzwana nginephilisi futhi liyiphilisi lomlingo imizwa yakho iba eyakho Khulisa izinga lokulala izokhuphula izinga lamandla akho izokwehlisa ubungozi bezifo ezithile njengesifo senhliziyo, isifo sikashukela nokunye okuningi futhi okuhle kakhulu kunakho konke ukuthi ayinayo imiphumela emibi futhi manje isikhululekile ngokuphelele leli pilisi alikho ngeshwa kodwa ngicabanga ukuthi uma kunjalo , wonke umuntu emhlabeni ubengayithatha, kubandakanya nami. Kulungile bangane bami.
Igama laleli philisi lomlingo ukuzivocavoca futhi ngiyesaba ukuthi akulula kangako ukuphuza iphilisi engizokunika lona ongalisebenzisa kungathatha umlingo wepilisi kodwa uma ulilinganisa uzothola zonke izinzuzo engizishilo futhi konke kukhonjisiwe ukuthi kuyasebenza. Ngakho-ke zama ukukufaka enkambisweni yakho yansuku zonke futhi uyisebenzise. Ngizoshiya neminye imininingwane encazelweni, ngicela ukhumbule ukuthi akukho kudla okukodwa, kufaka phakathi ama-superfoods anelebula, angenza ukudla okungenampilo.
Futhi abukho ubufakazi bokuthi ukudla okukodwa kungakhuphula izinga lamandla akho, abantu abaningi abadingi isithasiselo samavithamini ukukhulisa amazinga abo wamandla, futhi konke lokhu kungatholakala ngokudla okunempilo, nokulinganisela. Manje kunezizathu zezokwelapha nazo ezingadala ukukhathala futhi kunconywa ukuthi ukhulume nodokotela wakho ngakho ngizoshiya uhlu oluphelele encazelweni engezansi futhi ngincoma noma ngubani ukuthi ayifunde Njalo khumbula ukuthi umuhle. Ngiyethemba ukuthi amathiphu ami asebenzile futhi ngizokubona ngesonto elizayo.
Lobu ubuciko bangempela bokwenza obukhona njengamanje. Ngiyethemba nonke niyakwazisa ngoba ngicabanga ukuthi ngingene entweni yami yokulingisa lapha nginezipilisi ezinjenge-movie enkulu engenamkhawulo ngendlela uBradley Cooper amthanda ngayo umfana uBradley Cooper uma ubuka le ndatshana ke ngingumlandeli omkhulu wezinto zabalandeli kanye nokudla okunezivikelo eziqinile ukuqinisa indlela yokuphila ithiphu inombolo yesihlanu manje sesiyazi bafana siyabonga ngokubuka udaba lwaleli sonto
Ngabe ukuzivocavoca kukwenza ukhathale ngokwengeziwe?
Ukuzivocavoca umzimbafuthi kuyathuthukaeyakholala, ngakho-ke umawenalalakangcono,wenavuka uzizwe unamandla.Wenangizongikhathele kakhulungezinsukuuyavivinya umzimbangakho-kewenangokujwayelekile sizolalaOkuningingokuzwakalayo.22.01.2016
Ukuzivocavoca kufanele kube kuhle kuwe. Kungakusiza ukuthi ugcine isisindo esinempilo, uthuthukise impilo yakho yenhliziyo, futhi ulwe nokucindezeleka. Kepha njengezinto eziningi, kungenzeka ukuthi ukweqisa kungaba nemiphumela emibi emzimbeni nasengqondweni yakho.
Manje yini ngempela ukuvivinya umzimba ngokweqile? Yebo, kuya ngezici ezifana neminyaka yakho, impilo, kanye nokuvivinya umzimba kwakho. Kepha ngokujwayelekile, abantu abadala kufanele basebenzise ngokulingene cishe amahora amahlanu ngesonto, noma amahora amabili nohhafu noma ngaphezulu yomsebenzi onamandla, noma inhlanganisela yakho kokubili, ngokwe-CDC. Kepha ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuzikhandla ngale kwalokho akukhulisi izinzuzo zakho zezempilo Ucwaningo olungamangalisi luthole ukuthi ukukhanya kubagijimi abalinganiselayo kunamathuba amancane okufa kunabantu abangazivocavoci umzimba.
Ngokumangazayo, abanye abantu abagijime kakhulu ukwedlula kathathu ngesonto babe nengozi efanayo yokufa njengabangewona abagijimi. Ukugijima njalo kunemiphumela emibi. Ukuzivocavoca ngokweqile njengama-ultramarath nakho kungadala ukulimala kwenhliziyo, ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile, nemithambo yegazi ekhulisiwe kwabanye abantu.
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi ukukhuthazela ngokweqile kubeka izidingo ezeqile ohlelweni lwe-cardiovascular. Ucwaningo oluthile lwathola ukuthi ukuzivocavoca ngokweqile okuphindiwe kungalungisa inhliziyo, kuqinise izindonga zemisipha nezicubu ezibomvu. Olunye ucwaningo luveze ukuthi abantu besifazane bebencane amathuba okuthi bahlaselwe yisifo senhliziyo noma isifo sohlangothi uma bebezivocavoca umzimba okungenani kanye ngesonto.
Kodwa leyo ngozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi ikhuphukile nsuku zonke kubantu besifazane abajima. Ngakho-ke akusekho nzuzo yokuzivocavoca ngokweqile kunokuvivinya umzimba ngokulingene, futhi kungaba yingozi. Abesifazane bavezwa engcupheni ethile yalokho okubizwa nge- 'Female Athlete Triad'.
Lokhu kubandakanya ukulahleka kokuya esikhathini, i-osteoporosis noma ukulahleka kwamaminerali amathambo, nokuphazamiseka kokudla. Lezi zimpawu zivame ukubangelwa inhlanganisela yokuvinjelwa ngokweqile nokuvinjelwa kwekhalori. Ingancishiswa kanjani i-libido, engenzeka ngenxa yokukhathala ngokomzimba futhi eyehlisa amazinga e-testosterone.
Kokubili abesilisa nabesifazane, ukusetshenziswa ngokweqile kwandisa ingozi yokulimala ngokweqile njenge-tendonitis kanye nokukhathala ukwaphuka. Lokhu kulimala kubangelwa ukuhlukumezeka okuphindaphindiwe. Amasosha omzimba wakho nawo angahlupheka.
Yize ukuvivinya umzimba ngokulingene kungakhulisa amasosha akho omzimba, ukuzivocavoca ngokweqile kungakucindezela. Ngemuva kokuzivocavoca okukhulu, kufika amahora angama-72 efasiteleni elivulekile lokuzivikela komzimba. Empeleni, lokhu kusho ukuthi amagciwane namagciwane angangena kalula futhi angenele umzimba.
Futhi abasubathi abenza ukuzivocavoca ngokweqile nabo babhekene nezifo ezingaphezulu zokuphefumula. Ngakho-ke siyazi ukuthi ukuzivocavoca ngokweqile kungaba nemiphumela emibi emzimbeni wakho, ikakhulukazi inhliziyo yakho, imisipha, imisipha, namasosha omzimba wakho. Futhi kubantu abangaba yisigidi e-US, ukuluthwa kwezemidlalo kudala umonakalo omkhulu ebuchosheni babo.
Izimpawu zokulutha umzimba zifaka phakathi ukuhoxa. Yilapho uzizwa ukhathazekile noma ukhathele lapho uphuthelwa ukuzivocavoca okulawulwayo futhi ungakwazi ukunciphisa ukusebenza kwakho noma ngabe uyazi ukuthi kuzokulimaza. Manje into ebalulekile okufanele uyiqonde ukuthi akumele uvele uyeke ukuzivocavoca umzimba.
Okusemqoka ukuthola inani elifanele. Ngakho-ke khululeka, qhubeka ubaleke! Hhayi ngaso sonke isikhathi.
Kungani ngizizwa kabi lapho ngivivinya umzimba?
Uhlangabezana nesicanucanu ngesikhathiukusebenzisakuvamile, futhi kungachazwa ngokuthiukuzivocavoca umzimbaisicanucanu esenziwe. Okwenzekayo yilokhu: Njengoba uqalaukuzivocavoca umzimba, umzimba wakho uphambukisa igazi esiswini sakho uliphuthume nemisipha nesikhumba sakho.
Yini ebangela ukukhathala okukhulu ngemuva kokuzivocavoca?
Kuvamile ukukhathalangemuvaende noma enzimaZivocavoce. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka ngoba imisipha yakho iphelelwa amandla. Isistimu yakho yezinzwa emaphakathi futhi ilahlekelwa amandla ayo okuqhubeka nokuhambisa imisipha yakho. Lokhuizimbangelaumsiphaukukhathala, kukwenza uzizwe ukhathele.Juni 26. Februwari 2020
Kungani ngikhathala ngokushesha okukhulu lapho ngisebenza?
Ukuthi uyaqala yiniukuzivocavocaokokuqala noma ungumgijimi okhokhelwayo, umsiphaukukhathalakungumphumela ojwayelekile wecalaukuzivocavoca umzimbalokho kungabeka isidambisi enkambisweni yakho.Ukukhathalayindlela yomzimba wakho yokuzivumelanisa ne-aukufanelekauhlobo futhi ngikwenze wazi ukuthi usufinyelele umkhawulo wakho we-metabolic / psychological.Ephreli 16 2012
Ingabe ikhofi liyi-pre-Workout enhle?
Kwesinye isikhathi udinga amandla owengeziwe ngaphambi kweZivocavoce. Ngenkathi izinketho zigcwele, enye yezintandokazi kakhulungoba-Zivocavoceiziphuzoikhofi. Kuphezulu nge-caffeine futhi kubiza kancane,ikhofiyenza isiphuzo esisebenzayo sokuthuthukisa ukusebenza kokuzivocavoca umzimba.Mar 30 2021
Kungani umuntu ezizwa ekhathele uma enza imisebenzi enzima?
Noma ngabekukhonaukuqala kusebenzauphume okokuqala noma wenakukhonaumgijimi okhokhelwayo, umsiphaukukhathala kuyinto aumphumela ojwayelekile ojwayelekile weukuzivocavoca umzimbalokho kungabeka isidambisi enkambisweni yakho.Ukukhathalayindlela yomzimba wakho yokuzivumelanisa nomuthi wokuzivocavoca futhiukwenzauyazi ukuthi usufinyelele umkhawulo wakho wokunciphisa umzimba / wengqondo.Ephreli 16 2012
Kuyini ukukhathala okubangelwa ukukhathala?
Isingeniso.Ukuzivocavoca umzimba-ukukhathala okubangelwa(I-EF) ukunciphisa amandla amakhulu omzimba wokuzithandela abangelwa ukuqina nokudeukuzivocavoca umzimba(IGandevia, 2001). I-EF yinto eyinkimbinkimbi ethonywe yizo zombili izinto ezisemaphethelweni neziphakathi.UJan 25. Okthoba 2018
Kufanele ngiphuze ikhofi isikhathi esingakanani ngaphambi kokuzivocavoca?
Isikhathi nesilinganiso se-ukuphuza ikhofi ngaphambiliukuZivocavoce
Ucwaningo oluningi lusikisela ukuthi wenakufanele baphuze ikhoficishe imizuzu engama-45-60 ngaphambiukuzivocavoca umzimbaukuvumela i-i-caffeineukungena egazini lakho futhi ufinyelele ekusebenzeni okuphezulu (2).Mar 30 2021
Kungani ngizizwa ngikhathele ekugcineni kokuzivocavoca?
Unamandla kodwa ngokuzumayo, maphakathi nokuzivocavoca kwakho, ukukhathala kuza phezu kwakho. Ngokusho kuka-Active, “ukucindezela ngokweqile, ukucindezeleka, noma ezinye izinto eziningi zangaphandle kungadala ukukhathala, kodwa izimo eziningi zokukhathala zibangelwa ukungabi nensimbi egazini, isimo esaziwa njenge-anemia.”
Iyiphi indlela engcono yokubhekana nokukhathala ngesikhathi sokuzivocavoca?
Kulesi sigaba, unika umzimba wakho umjikelezo onamandla owengeziwe wezakhi zomzimba nezithako zokukhathala ukuze unikeze amandla nokugxila, ulethe inani eliphakeme lokugeleza kwegazi emisipheni yakho ukulethwa kahle kwezakhi zomzimba, futhi wenze umzimba wakho ululame.
Kungani ngithola amandla amaningi ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba?
Uma uzama ukukhipha amakhilogremu athile futhi ulandela ukudla okune-carb ephansi, kunethuba elihle lokuthi awudli ama-carbs anele ukunika amandla ngokusebenza kwakho. 'Umthombo oyinhloko wamandla omuntu ngesikhathi sokuzivocavoca yi-glucose, ushukela olulula othathwe kuma-carbohydrate,' kusho uDkt Li.